ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးလစာ: PT ရဲ့များအတွက်ဒေသများဖြစ်သည့်ကချင်ငွေပေးချေရန်တစ်ဦးကလမ်းညွှန်
သငျသညျ (အစတစ်ဦးသည် PT အဖြစ်လူသိများ) မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးဖြစ်လာစဉ်းစားနေပါသလား? ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်ရောဂါခံစားခဲ့ကြရသည်သူတွေကိုနှင့်အတူခေတ်မီအသက်အရွယ်အလုပ်ဤအံ့ဖွယ်အလုပျသမားမြား။ သူတို့ကနာကျင်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ခြုံငုံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏လူနာများကိုကူညီပေးပါတယ်။ ဆေးပညာစက်မှုလုပ်ငန်းဒီဧရိယာကလေး Boomers အသက်အရွယ်အဖြစ်ကြီးထွားလာနှင့်ပိုပြီးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်နေပါသည်။
ရံဖန်ရံခါရိုးရှင်းစွာမှတ်အဖြစ်, သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုးတက်အောင်နှင့်ကြောင့်တစ်ဦးနာမကျန်း, ဒဏ်ရာရ, ဒါမှမဟုတ်နာတာရှည်အခွအေနေ၎င်းတို့၏နာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အတူအကူအညီလိုအပ်သူကိုလူနာများ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ကုသမှုအတွက်အရေးပါလှတဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။
သူတို့ကအလုပ်လုပ်တဲ့လည်ပင်းနှင့်နောက်ကျောဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာများ, မျိုးကွဲ, ကြွက်သားညောင်း, အရိုးကျိုး, ခွဲစိတ်ကုသမှု, အဆစ်, အလုပ်သို့မဟုတ်အားကစားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒဏ်ရာ, (ထိုကဲ့သို့သောနှောက်လက်ခြေသေသောသူသို့မဟုတ်လေဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့) အာရုံကြောရောဂါသို့မဟုတ်အခြားသောနှင့်အတူရုန်းကန်နေကြသူအပေါင်းတို့သည်အသက်အရွယ်မရွေးလူနာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် အခွအေန။
ထိုကဲ့သို့သောချိုင်းထောက်, ကြံနှင့်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ပေါ်ကအဖြစ်သုံးစက်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းလိုအပ်ရသောအလုပ်လုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအတွင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအပါအဝင်လူနာစောင့်ရှောက်မှုပေးနည်းစနစ်, အမျိုးမျိုးအပေါ်ပညာတတ်။ သူတို့ကအစနာကျင်မှုလျော့ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုတိုးတက်စေရန်အထူးလှုပ်ရှားမှုကြွက်သားများအတွက်နည်းစနစ်, အဆစ်နှင့်အခြားပျော့တစ်ရှူးသင်ယူကြသည်။
ထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏တိုင်ကြားမှုများကိုနားထောင်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုလမ်းလျှောက် / ရပ်စောင့်ကြည့်အဖြစ်နည်းလမ်းများ, အမျိုးမျိုးသုံးပြီးလူနာရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို Diagnosing ။
လူနာရဲ့ပန်းတိုင်များနှင့်စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်၏မျှော်မှန်းထားသည်ရလဒ်များအသေးစိတ်တဲ့လူနာများအတွက်တစ်ဦးချင်းစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကို Creating ။
, ထိုလူနာသူတို့ရဲ့ရွေ့လျားတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီနာကျင်မှုသက်သာ, နောက်ထပ်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာတားဆီးများနှင့်ခြုံငုံကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ဆန့်နည်းလမ်းများ, လေ့ကျင့်ခန်း, လက်-အပေါ်ကုထုံးနှင့်ကုထုံးပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးမျိုးအသုံးချ။
အဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်ထားရန်နှင့်ဘယ်လိုနာလန်ထူမှုလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးမည်သည့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှနှင့် ပတ်သက်. လူနာနှင့်မိသားစုပညာရေးကိုပေး။
2014 ခုနှစ်တွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 210,900 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့အများဆုံးမကြာခဏအတွက်အသုံးချခဲ့ကြအဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းများပါဝင်သည်:
, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိန့်ခွန်းများနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ကုသသို့မဟုတ်အသံပညာရှငျ၏ရုံးများ: 34%
ဆေးသမား '' ရုံးများ: 5%
လူနာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်သူတို့ရဲ့အလုပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, မှတ်, သူတို့ခြေထောက်ပေါ်သူတို့ရဲ့အချိန်အများစုကိုဖြုန်းနေကြတယ်။ သူတို့ဟာမကြာခဏလူနာရုတ်သိမ်းရေးနှင့်ရွေ့လျားကြောင့်နောက်ကျောဒဏ်ရာများအတွက်အန္တရာယ်မှာရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအန္တရာယ်များကိုသင့်လျော်သောကိုယ်ခန္ဓာကိုစက်ပြင်နှင့်ရုတ်သိမ်းနည်းစနစ်သင်ယူခြင်းနှင့် အသုံးပြု. လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, ထို DPT အစီအစဉ်ကို3နှစ်အတွင်းပြီးစီးခဲ့သည်။ သို့သော်အများဆုံးအစီအစဉ်များကိုလျှောက်ထားဘွဲ့ကျင်းပရန်လိုအပ်အဖြစ်သူတို့ဝန်ခံနိုင်ပါသည်မတိုင်မီ (ဥပမာ, ဓာတုဗေဒ, ခန္ဓာဗေဒ, ဇီဝဗေဒနှင့်ရူပဗေဒအတန်းများအတွက်) တိကျသောပညာရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြဘူး။ သူတို့ကိုဘွဲ့နှင့် DPT နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူဘွဲ့ရဖို့ခွင့်ပြုမယ့် 6- သို့မဟုတ်7နှစ်အစီအစဉ်ကိုသို့ကောလိပ်ကျောင်း freshman ဝန်ခံတချို့ပရိုဂရမ်များရှိပါသည်။ အများစုမှာ DPT အစီအစဉ်များကိုလျှောက်ထားသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးဗဟိုလျှောက်လွှာဝန်ဆောင်မှု (PTCAS) မှတဆင့်လျှောက်ထားကြောင်းလိုအပ်သည်။
ဘွဲ့ရပြီးနောက်, သူတို့ကလျှောက်ထားခြင်းနှင့်များသောအားဖြင့် 1 တစ်နှစ်ဝန်းကျင်ကြာနှင့်စောင့်ရှောက်မှု၏အထူးပြုနယ်ပယ်များတွင်နောက်ထပ်သင်တန်းနှင့်အတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းတဲ့လက်တွေ့နေထိုင်အစီအစဉ်ကိုဖြည့်စွက်စေနိုင်သည်။ တစ်ဦးနေထိုင်အစီအစဉ်ကိုရိုက်ထည့်ဖို့မရွေးချယ်သူများသည်အဆင့်မြင့်မြင့်လက်တွေ့ဧရိယာ၌မိဿဟာဖြည့်ခြင်းဖြင့်ထပ်မံအထူးပြုဖို့ရွေးချယ်လိမ့်မည်။
လိုင်စင်, Certificate နှင့်မှတ်ပုံတင်
လိုင်စင်လိုအပ်ချက်များကိုနိုင်ငံတော်ကကွာခြားနေစဉ်, အားလုံးလိုင်စင်ကိုင်နှင့်ကာယကုထုံး၏ပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့၏အသင်းချုပ်တို့ကအုပ်ချုပ်အမျိုးသားကာယကုထုံးစာမေးပွဲသွားသည့်ကုထုံးလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်အချို့သောပြည်နယ်များတစ်ရာဇဝတ်မှုနောက်ခံစစ်ဆေးမှုများနှင့်ဥပဒေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ရဲ့လိုင်စင်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်, အများဆုံးပြည်နယ်ပညာရေးသင်တန်းများကိုဆက်လက်လိုအပ်သည်။ သင့်ရဲ့ပြည်နယ်များအတွက်တိကျသောလိုအပ်ချက်များဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့, ပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အတူစစ်ဆေးပါ။
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရရှိမှုပြီးနောက်အချို့သောမှတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအထူးကုသမှုများ၏အမေရိကန်ဘုတ်အဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ဘုတ်အဖွဲ့-လက်မှတ်အထူးကုဖြစ်လာမှရွေးကောက်တင်မြှောက်။ လက်မှတ်သက်ကြီးရွယ်အိုများ, အရိုး, အားကစားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအပါအဝင် 8 အထူးဒေသများရှိရရှိနိုင်ပါသည်။ ဘုတ်အဖွဲ့-လက်မှတ်ဖြစ်လာစေရန်, တဦးတည်းအနေနဲ့စာမေးပွဲနှင့်လက်တွေ့အလုပ် 2,000 နာရီနိမ့်ဆုံးဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်အထူးဧရိယာအတွင်းရှိအမေရိကန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအသင်း (APTA) အသိအမှတ်ပြုနေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ်အတွက်ဖြည့်စွက်ရပေမည်။
အသေးစိတ်မှတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို: မှန်မှန်ကန်ကန်တစ်လူနာရဲ့အခွအေနေရှာဖွေရေးမှာကြောင်းထိရောက်သောနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံစောင့်ရှောက်မှုပေးနှင့်ကုသအကဲဖြတ်ရန်စေရန်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးခိုင်မာတဲ့စူးစမ်းခြင်းနှင့်သရုပ်ခွဲကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်သငျ့သညျ။
သူတို့တခြားသူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပျော်မွေ့သင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သည့်၎င်းတို့၏လူနာများနှင့်အတူအပြန်အလှန်အချိန်သိသိသာသာပမာဏ, ဖြုန်းအဖြစ်, စိတ်ရှည်လှုံ့ဆော်မှုများကိုကုသမှုအစီအစဉ်များကိုရှင်းပြနှင့်လူနာများ '' စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနားထောင်ရန်နိုင်ပါလိမ့်။
ကြောင့်လူနာရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်ကုသမှုအစီအစဉ်များကိုစိတ်ကြိုက်ရန်လိုအပ်မှတစ်ဦးသည် PT ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်လိုအပ်အဖြစ်စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များကိုချိန်ညှိပေးနိုင်ရပါမည်။
မေလ 2015 ၏အဖြစ်, မှတ်များအတွက်ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်လုပ်အားခမှတ်၏ထက်ဝက်ကဒီငွေပမာဏကိုတဝက်ဒီငွေပမာဏထက်လျော့နည်းရရှိခဲ့ထက်ပိုမိုရရှိခဲ့သည်ဆိုလိုတာက $ 84,020 ဖြစ်ခဲ့သည်။ နိမ့်ဆုံး 10% $ 119,790 ထက်လျော့နည်းရရှိခဲ့စဉ်အမြင့်ဆုံး 10% $ 57,060 ကျော်ရရှိခဲ့သည်။
မူလစာမျက်နှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှု: $ 91,400
လူနေအိမ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဘိုးဘွားရိပ်သာအဆောက်အဦ: $ 91,140
ပြည်နယ်ဒေသခံနှင့်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများ: $ 85,360
ဆေးသမား '' ရုံးများ: $ 83,420
, လုပ်ငန်းခွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မိန့်ခွန်းကုသနဲ့အသံပညာရှငျ၏ရုံးများ: $ 80,000
ဝင်ငွေထွက်စစ်ဆေး related အားကစားအပေါ်အသေးစိတ်အတွက် အားကစားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးလစာ စာမျက်နှာ။
အလားအလာယောဘကို Outlook နဲ့
ဒါဟာမှတ်များ၏အလုပ်အကိုင်အ 34 အခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလယ်ကွင်းထက်အများကြီးပိုမြန်သောအ 2014 မှ 2024% တိုးမြှင့်မည်ကိုစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်များအတွက်ဝယ်လိုအားအကြီးအကျယ်အသက်တာ၌ကြာကြာတက်ကြွတည်းခိုနေသောကလေး boomers ၏တိုးမြှင့်အရေအတွက်ကိုကနေလာကြလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်အဟောင်းများကိုလူတွေလေဖြတ်ခြင်း, နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအားဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလိုအပ်ကြောင်း mobility-related ဒဏ်ရာအဘို့အမြင့်မားအန္တရာယ်မှာရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောအဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါကဲ့သို့သောနာတာရှည်အခြေအနေများ, မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းထက်ယနေ့ပိုပြီးပျံ့နှံ့နေသည်။ ပိုများသောမှတ်သောဤလူနာကသူတို့အခွအေနေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ mobility ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတိုးတက်လာဒဏ်ရာနှင့်နာမကျန်းဆက်ဆံဖို့ဖျော်ဖြေပြင်ပလူနာခွဲစိတ်၏နံပါတ်တိုးလာကြပါပြီ။ ထို့အပြင်နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့်ဆေးဝါးတိုးတက်မှုကိုလည်းပြန်လည်ထူထောင်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်နိုင်ပါသည်သောရှင်သန်မွေးဖွားချို့ယွင်းချက်နှင့်အတူစိတ်ဒဏ်ရာသားကောင်များနှင့်မွေးကင်းစကလေးတစ်ဦးပိုကြီးတဲ့အရေအတွက်ကခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်။ မှတ်လူနာခွဲစိတ်ရာမှပြန်လည်နာလန်ထူလာအောင်ကူညီပေးအတွက်အရေးပါလှတဲ့အပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးမှတ်ချက်တွင်, ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးအာမခံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုပိုမိုလူတွေကကျန်းမာရေးအာမခံမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဆိုလိုသည်။ ဤသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလိုအပ်စေခြင်းငှါနာတာရှည်ဒဏ်ရာများနှင့်အခြေအနေများအဘို့အကုသမှုရှာလူတွေပိုပြီးဦးတည်သွားစေဖွယ်ရှိသည်။
34 ထံမှ 71,800 ရန်မျှော်လင့်နေတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခုနှစ် 2014% တိုး (သို့မဟုတ် 2024 အလုပ်အကိုင်များ) နှင့်အတူအလားအလာအထူးသဖြင့်ကျွမ်းကျင်-သူနာပြုအဆောက်အစူးရှသော-စောင့်ရှောက်မှုဆေးရုံများနှင့်အရိုး setting တွင်, လိုင်စင်ရမှတ်ဘို့ကောင်းပါတယ်။ ထို့အပြင်ဆင်ခြေဖုံးနှင့်မြို့ပြဒေသများတွင်နေထိုင်အများအပြားမှတ်မှုကြောင့်ကျေးလက် setting တွင်အလုပ်အကိုင်အဘို့အလားအလာလည်းမြင့်မားတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
PT လက်ထောက်နှင့်အကူအညီအထောက်အပံ့များ: တခါတရံမှာ PTAs အဖြစ်ရည်ညွှန်း, ဒီလယ်အလုပ်အကိုင်၏ကြီးကြပ်မှုနှင့်ဦးတည်ချက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်အလုပ်သမားလိုအပ်သည်။ သူတို့ကပြန်လည်လူနာနာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုပြန်လည်ကူညီမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
အပန်းဖြေကုထုံးအစီအစဉ်ကိုသြဒိနိတ်နှင့်တိုက်ရိုက်အပန်းဖြေအခြေစိုက်ကုသမှုအစီအစဉ်များကို။ သူတို့တစ်တွေလူနာရဲ့, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးသုခချမ်းသာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဒရာမာ, ဂီတ, ကခုန်, အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာ, ရေနေ, ဂိမ်းများ, နှင့်ရပ်ရွာ outings သုံးနိုင်ပါသည်။
နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများအားအသုံးပြုခြင်း, သူတို့ကမသန်စွမ်းကူညီဒဏ်ရာရ, ဒါမှမဟုတ်နေမကောင်းလူနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်သူတို့ကနေ့စဉ်အသက်အဘို့လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အသံပညာရှငျရှာဖွေရေးမှာ, ပြုမူဆက်ဆံနှင့်ကြားနာ, နား, သို့မဟုတ်ချိန်ခွင်လျှာပြဿနာများနှင့်အတူလူနာစီမံခန့်ခွဲ။
Chiropractors အရိုး, ကြွက်သား, အရွတ်, ရွတ်နှင့်အာရုံကြောအပါအဝင် musculoskeletal စနစ်, ပြဿနာဆက်ဆံဖို့, ကျောရိုးခြယ်လှယ်များနှင့်ညှိနှိုင်းမှုအဖြစ်ကတခြားကုသမှုပုံစံများကိုအသုံးပြုပါ။
speech-ဘာသာစကားများရောဂါဗေဒ: ဒါ့အပြင်မိန့်ခွန်းကုသအဖြစ်ရည်ညွှန်း, ဒီလယ်ပြင်၌အလုပျသမားရှာဖွေရေးမှာ, အကဲဖြတ်ရန်, ကုသမှုနှင့်လူနာများအတွက်မျိုချခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးမမှန်ကာကွယ်တားဆီးဖို့အလုပ်။ ဒါကလေဖြတ်သို့မဟုတ်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာ, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှောင့်နှေးနေတဲ့အကွဲအာခေါင်, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ, ပါကင်ဆန်ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်ကြားနာဆုံးရှုံးမှု၏ရလဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သငျသညျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားကိုသည်းခံခြင်း, သည်းခံခြင်း, Dexter, ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ကယုံကြည်သို့မဟုတ်မ, အကောင်းမြင်အပါအဝင်တစ် PT, ဖြစ်လာခြင်းမှာ excel ကကူညီလိမ့်မည်ဟုအချို့သော attribute တွေရှိပါတယ်။ သို့သော်ဤသာလမ်းသငျသညျစိတျအပိုငျးကိုယူပါလိမ့်မယ်။
သင်လိုအပ်မယ့်ပထမဦးဆုံးအရာတစျခုမှာသင့်ရဲ့အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအထက်တန်းကျောင်းနေဆဲလျှင်, သင်တို့ကိုအကောင်းတစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းပေးကူညီပေးဖို့ရူပဗေဒ, သင်္ချာ, ဓာတုဗေဒ, ဇီဝဗေဒနှင့်လူမှုရေးဘာသာရပ်ယူကောင်းတစ်စိတ်ကူးပါတယ်။ ဒါဟာသင်ကောင်းတစ်ဦးသည်ကျောင်းသို့အရကူညီဖို့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအချိန်နာရီ 200 မှ 300 ရှိသည်ဖို့လည်းကောင်းတယ်။
Next ကို, သင်ပိုကောင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအတွက်တစ်ဘွဲ့ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့နောက်ဇီဝြဖစ်စဉ်, လူ့ခန္ဓာဗေဒ, ဒါမှမဟုတ် neuroanatomy အပေါ်တစ်ဦးအာရုံနဲ့မာစတာဘွဲ့ဝင်ငွေ။ 2016 ၏အဖြစ်, သင်တစ်ဦးသည် PT ဖြစ်လာဖို့သင့်ရဲ့ပါရဂူဘွဲ့ရရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်အကိုင် Outlook နဲ့
အများအပြားလုပ်ကိုင်သောအလုပ်အကိုင်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကနေဆငျးရဲခံရစေခြင်းငှါနေစဉ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး 1.1% တစ်ဦးအလွန်နိမ့်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည်အတော်ပင်။ ဒါဟာသူတို့ပိုပြီးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ရှိရာတစ်ဦးသည်အသက်ရောက်ရှိကလေး boomers အားဖြင့် ပို. ပင်လူကြိုက်များကိုဖန်ဆင်းသောလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ PT ၏တစ်ဦးကမူလတန်းတာဝန်ဒဏ်ရာ, နာမကျန်း, နာကျင်မှု, ဒါမှမဟုတ်မသန်စွမ်း၏အခြားအမျိုးအစားများကနေလူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ် restore ကိုကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုထုံးရွေ့လျားမှု, တန်ခိုးတော်ကို၎င်း, ညှိနှိုင်း၏လူနာရဲ့အကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်ကူညီရန်နည်းလမ်းများအမျိုးမျိုးပါဝင်နိုင်သည်။ တစ်ဦးကကုထုံးပန်းတိုင်ပြီးမြောက်ဖို့အပူ, အလင်း, ရေ, အအေးကုထုံးအဖြစ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲသုံးနိုင်ပါသည်။ Orthotic နှင့်ခြေတုလက်တုပစ္စည်းတွေလည်းမီးရထားလူနာကကူညီရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသအချိန်မတန်မီမွေးကင်းစ, ကလေးအထူးကုလူနာ, အားကစားဒဏ်ရာလူနာနောက်ကျောနှင့်လည်ပင်းဒဏ်ရာ, amputees, သက်ကြီးရွယ်အိုများလူနာအဆစ်နှင့်အတူလူနာနှင့်များစွာသောပိုပြီးအပါအဝင်လူများ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရ။
အများအပြားဆရာဝန်များကလိုပဲ, သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ဆေးရုံများ, ဆေးခန်း၌၎င်း, ပင်အထူး၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်တပ်ဆင်ထားဖြစ်ကြောင်းပုဂ္ဂလိကရုံးခန်းထဲမှာမြင်ကြသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်သူတို့သည်လည်းသူတို့၏လူနာကူညီဖို့လူရဲ့အိမ်တွေသို့မဟုတ်ပင်ကျောင်းများသို့သွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုပါအလုပ်ကိုယ်ထိလက်ရောက်အချိန်များတွင်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအောက်မှာ, ဓာတ်လှေကားနိုင်တော့မည်နှင့်အချိန်ကြာရှည်စွာရပ်တည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု: ဆိုနီယာတစ်ဦးက New အလုပ်ရှာဖွေရေးစဉ်းစား
သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်ကို Jill နဲ့အရသာနေ့လယ်စာပြီးနောက်ဆိုနီယာစဉ်းစားရန်သတင်းအချက်အလက်အမြောက်အမြားနှင့်အတူအိမ်သို့သွားလေ၏။ သူမသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထူးပြုကုသနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုသူတို့ကယ့်လူနေမှုဘို့ထိုသို့ပြု၏အကြောင်းကိုပိုမိုသိလို။ သူမသည်ကို Jill အသစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖို့ခုန်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သိတယ်, ဒါပေမယ့်ဆိုနီယာဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ပိုမိုလေ့လာချင်တယ်။
ဆိုနီယာနှစ်ခုကလေးတွေရှိခဲ့ပါတယ်, သူသူမကလေးများနှင့်အတူအချိန်အနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအလုပ်လုပ်နိုင်မှလိုချင်သိတယ်။ သူမလည်းသူတို့အစဉ်အဆက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာရတယ်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလိုအပ်ပါကသူမ၏ယောက်ျားလေးများကိုကူညီနိုင်ဖြစ်ခြင်း၏စိတ်ကူးကြိုက်တယ်။
တစ်ဦး PT ရဲ့အလုပ်တစ်ခုဒဏ်ရာသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်အပြည့်အဝ mobility restore ကိုကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကသူမသည်လူတွေပိုမြန်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေကူညီရန်ဆရာဝန်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်မယ်လို့နေသေးတယ်။
ဤသည်ဆိုနီယာများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အဆုံး၌တစ်ဦးသည် PT အဖြစ်ကောင်းစွာသူမ၏အဘို့အညာဘက်ကိုရှေးခယျြမှုဖြစ်သကဲ့သို့သူမတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ။
မကြာခဏ 40 နာရီတပတ်အလုပ်လုပ်ဒါပေမယ့်အချို့လည်းသူတို့ရဲ့လူနာများကို '' အလုပ်များအချိန်ဇယားထားရှိရန်တနင်္ဂနွေနှင့်ညနေပိုင်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အလုပ်သမားစာရင်းဇယားများ၏ဗျူရို၏အဆိုအရ 20% အလုပ်အခြိနျပိုငျးဝန်းကျင်။
မှတ်သူတို့အလုပ်လုပ်နေကြဘယ်မှာပေါ် မူတည်. တစ်ဦးမတူညီကြလစာအကွာအဝေးရှိသည်။ တစ်ဦးကနယ်လှည့် PT ပိုပြီးငွေရှာဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ တစ်ဦးကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးရဲ့လစာ $ 60,000 (ကအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ဒီမှာစစ်ဆေး) ကိုပုံမှန်အားဖြင့် $ 88,000 ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကပိုအတွေ့အကြုံရဖို့သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတာဝန်များကိုကောက်အဖြစ်သူတို့ကများသောအားဖြင့်ပိုပြီးပါစေ။